Maalinta: Meey 14, 2020
Gaadiidka rakaabka ee waddada, qiimaha safarka saqafka sare ee loo adeegsado illaa 19ka Luulyo sababtoo ah dillaaca Covid-31 wuxuu noqon doonaa inta u dhaxaysa 100 iyo 500 liras. Qiimaha tigidhada rakaabka ee wadada ayaa dib loo macneeyay Wasaaradda Gaadiidka. [More ...]
Go'aan Canshuurta oo Dheeraad ah oo Lagu Soo Geli Karo Alaabada Caddaan
Nadir Küpeli, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha Eskişehir OSB, wuxuu taageerayaa warshadaha dalka in ay ilaashadaan waxsoosaarkooda iyo tartankooda inta lagu gudajiro xilliga kala guurka canshuurta dheeriga ah, oo lagu dabaqi doono heerar kala duwan ilaa 30 boqolkiiba. [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa, (BTSO), oo fulisay mashaariic badan oo loogu talagalay Bazaar Taariikhi ah iyo Gobolka Hanlar, oo ku yaal xarunta ugu muhiimsan meesha wax ka iibsashada iyo ganacsigu ay garaaca wadnaha ku yeeshaan, iyadoo leh coronavirus. [More ...]
EGO, oo mid cusub ku dartay hal-abuurka cusub ee la sameeyay si guriga loo joogo oo loo siiyo go'doomin bulsho oo loogu talagalay muwaadiniinta, inta lagu guda jiro faafitaanka coronavirus (Covid-19), ayaa codsiyooyinka Ankarakart ka keenay internetka. Agaasinka Guud ee Ankara ee Magaalada Ankara EGO [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir, oo maalgashi weyn ka sameysay gaadiidleyda magaalada, ayaa gaartay 75-ta Yurl Neighborhood iyada oo loo sii marinayo Cisbitaalka Magaalada iyo Kumlubel iyada oo loo sii marayo Opera, ka dib 75-kii Xaafadda Yıl iyo Şeker Mahallesi. [More ...]
Codsiga Lacag Bixinta oo laga joojiyay Antalya
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen dalabka Mushaarka ee dadka reer Antalya ee dhibaato dhaqaale haysato. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in nidaamka lacag bixinta uu ka furmay ilaa maantadan la joogo dalabka qaan-goosiga la hakiyey, kaas oo ku shaqeynaya qaan-sheegashada ASAT. [More ...]
Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee ay ka xor yihiin Fayrasyada waxaa isticmaala Ultraviolet Ray
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, Xubin ka tirsan Golaha ASP MemLSAN iyo kuliyadda injineerinka ee jaamacadda Erciyes. Dr. Wuxuu qabtay kulan ah ka qayb galka Ahmet Turan Özdemir. Iyaga oo leh kulan video ah [More ...]
Ku dhawaad ​​125 kun oo biil ayaa la joojiyay toban maalmood gudahood
Waxaa bilaabay madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu si uu u taageero dadka dakhligoodu lumay ama lumay intii lagu gudajiray nidaamka masiibada, dalabka "Invoice on the Fluid" wuxuu keenaa tabarucayaasha iyo mutadawiciinta si ay u arkaan gacan ku siisa gacanta. codsiyada [More ...]
Codsiga Maskematic Mobile ee ka bilaabmay İzmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay bilaabmayso dalabka maskeemiska ee mobilada meelaha aan lahayn metro kadib mashiinka mashiinka ah ee la galiyay xarumaha metrooga si loo fududeeyo helitaanka bilaashka ah ee muwaadiniinta maaskarada caafimaadka. Masematisyada mobiillada lagu rakibo meel kasta ayaa la gashan karaa. Cudurka coronavirus [More ...]
Ku guuldaraysiga kilyaha ee Saddex-meelood meel kuwa Daaweynta Coronavirus
Sida lagu sheegay daraasad, in ka badan saddex meelood meel bukaannada lagu daweeyey fayraska Corona ee magaalada New York, waxaa soo foodsaaray kelyo xanuun. Waxaa la sheegay in 15 boqolkiiba dadkaan ay ku xirnaayeen baaritaanka. Cilmi baarista su’aasha, New [More ...]
Guddiga Yurub wuxuu shaaciyey Xeerarka Safarka Muddada ee Corona
Komishanka Yurub ayaa ku dhawaaqay qawaaniin taxana ah oo safarka looga dhigayo mid nabdoon ka dib markii dhaqanada yareynta viruska Corona ay dhaqan galeyso wadamo badan. Duulista hawada oo joogsatay ujeedada xeerarka dalxiiska iyo faafitaanka cudurka [More ...]
Xarunta tababarka xirfadaha ee ESO ayaa tusaale ah
Golaha Rugta Ganacsiga iyo Isweydaarsiga Isweydaarsiga (TOBB), oo ay kaqeybgaleen kaqeyb galka Shirka Tababbarka Shaqada ee Iskuduwaha Eskişehir, shaqada rakibaada socota "Eskişehir Rugta Wershadaha - Xarunta Tababbarka Xirfadaha" ayaa bixiyay macluumaad ku saabsan. [More ...]
Wejiga 1000 ee codsiyada e-Dowlada 3 TL taageero masiibada ayaa la sameynayaa. Bixinta 1-aad iyo 2-aad ee lacag bixinta kaalmada bulshada ayaa lasiiyay dadka baahan. Faahfaahinta sida loo dalbado wejiga 3aad 1000 codsiyada gargaarka bulshada TL [More ...]
Asım Taş, oo ku lahaa dhulkiisii ​​qodista dhulkiisa intii lagu guda jiray shaqada tunnel-ka ee YHT, wuxuu cadeeyay in aaladda beeraha ee lagu aasay dheriga ay daboolay shirkadda qandaraaslaha. Sida la xasuusan doono; Asım, oo ku noolaa Kurtköy oo ka tirsan Xarunta Bilecik usbuucyadii la soo dhaafay [More ...]
Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda ayaa diyaarisay laba wicitaan oo cusub oo abuuri doona isku-xirnaanta warshadaha iyada oo loo marayo hay'adda ay khusayso, TUBITAK. Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa ku dhawaaqay baaqyo labanlaab oo lagu taageerayo warshadaha. “Dalbo R&D” iyo [More ...]
Zehra Zümrüt Selçuk, Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, ayaa kordhisay awooda adeega maraq ee maraqa ay ku taageerayaan ilaa 39 kun 484 qof sanadkaan gudihiisna ku wareejiyay 38 milyan oo lira lagu kariyo jikooyinka maraqa. [More ...]
Agaasimayaasha Dadweynaha ayaa u Furan ardayda inay galaan YKS Maayo 18-19
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa wareegto dheeri ah u dirtay 81 Maamulada Degmooyinka ee ku saabsan bandoowga. Waxaa lagu sheegay wareegtadan in tan iyo markii uu cudurka coronavirus soo baxay, in la qaaday tillaabooyin badan oo lagula dagaallamayo cudurka iyo la hirgaliyay. Helay [More ...]
Wareegtada ay u soo dirtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamullada, laga bilaabo waqtiga cudurka faafa ee coronavirus, talooyinka Wasaaradda Caafimaadka iyo Guddiga Sayniska, iyadoo la raacayo tilmaamaha Madaxweyne Recep Tayyip Erdopan; dillaac / faafin ay keentay caafimaadka guud iyo kala dambeynta dadweynaha [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo fududaysay gaadiidkii iyada oo siineysa khadka tareenka Akçaray ee adeegga muwaadiniinta, ayaa bilaabay shaqo loogu talagay dadka lugeynaya ee maraya wadada ku taal Sekapark Tram stop. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu wuxuu baaritaan ku sameeyay Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay qorsheynayaan inay khadka wax ka dhigaan adeegga 19ka Maajo, laakiin hannaanka faafa ma oggolaanayo arrintaas, ayuu yiri Foremamoğlu, “Ajaanibta ee nidaamka calaamadda xariijinta [More ...]
Guddiga Nadaafadda Dalxiiska ee Dawladda Hoose ee Magaala Weyn ee Magaalada Izmir ayaa markii labaad shir isugu yimid si ay u go'aamiyaan shuruudaha laga heli doono hoteelada iyo xarumaha cuntada iyo cabitaanka cabitaanka ka dib nasashada ee tillaabada coronavirus. Izmir wuxuu ka hirgalinayaa degmada qalalaasaha ka hortaga cudurka faafa ee coronavirus [More ...]
Gudiga Sayniska Izmir wuxuu yiri 'Waa inaanu furmin Suuqyada Suuqa'
Gudiga Sayniska ee Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ayaa soo saaray bayaan ku saabsan furitaanka xarumaha laga dukaameysto Isniinta, 11ka Meey, oo ah tallaabada ugu horeysa ee nidaamka caadi ka ahaanshaha cudurka Coronavirus. Guddiga Sayniska “Caafimaadka dadweynaha weli lama aasaasin [More ...]
Telegram of Atatürk Horyaalkii ugu horreeyay ee Olimbikada Yaşar Erkan
Sanadkii 1936, kii kow iyo tobnaad ee cayaaraha olimbikada casriga ah waxaa qaban qaabiyay Jarmalka ee Berlin Ciyaaraha Olombikada Greco-Roman tartamada halganka ayaa ka socday Hoolka Ciyaaraha Deutschland Halle afar maalmood. Midkii ugu horreeyay wuxuu ahaa 9 kg bishii Agoosto 1936, 61 [More ...]
Wasiirka Pakdemirli wuxuu caddeeyey in iyadoo la adeegsanayo nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19), in dad badani ay rabaan inay kaqeybqaataan waaxda beeraha oo ay yiraahdaan, "Waxaan u horumarinaynaa mashaariic kuwa kaqeyb qaadan doona ganacsigan. Dhallinyar xiiseynaysa beeraha [More ...]